Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na-adịghị Ekefu Ihe Ọ Bụla
LB na-egosi Full Story of a Football Genius with the nickname "El Tucumano". Nwa anyị Roberto Pereyra Akụkọ gbasara akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere mmalite ọma ya na oge 2018 / 2019 Premier League. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole maara ọtụtụ ihe banyere Roberto Pereyra's Bio nke bụ ihe na-adọrọ adọrọ. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na -Mbụ na Ndụ Ezinụlọ
Malite, aha ya bụ Roberto Maximiliano Pereyra. A mụrụ Roberto Pereyra na 7th January 1991 na nne ya Rosa Toledo na nna Leonides Pereyra na San Miguel de Tucuman.
Alụmdi na nwunye dị n'etiti nne na nna ya; Leonides Pereyra na Rosa Toledo bụ nke ezigbo ọnụ ọchị na obi ụtọ. Hụ otu o si yie papa ya.
Ndị nne na nna Roberto Pereyra bụ Ndị Kraịst si n'ogige ndị Roman Katọlik. Tupu Pereyra abata na njedebe, nna ya rụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ihe ọ juiceụ lemonụ lemon. N'oge ahụ, Leónides aghaghị ịrụsi ọrụ ike iji nye ihe ezinụlọ ya ga-eri na ụgwọ a na-akwụ kwa ụbọchị.
Pereyra, n'adịghị ka ọtụtụ ndị na-egwu egwu site na ezinụlọ (Gerard Piqué, Andrea Pirlo, Hugo Lloris Mario Götze wdg) nwere oge ihe isi ike n'oge ndụ ya. O tolitere na mkpọda nke Tucuman ya na ụmụnne ya nwoke abụọ na nwanne ya nwanyị.
N'oge ahụ, agbata obi ya mara mgbe niile maka ọdịdị ya ka ọ dị na mpaghara ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Argentina. Pereyra na ndị mụrụ ya biri n'otu ụlọ osisi nke na-adịghị arụ ọrụ ruo mgbe ha kwagara n'otu ụlọ a rụrụ. Ndị a na-ada ka mmelite ruo mgbe o doro anya na ebe obibi ha dị ka ọnụ ọgụgụ igbe. Ịhụ ihe isi ike kpatara Pereyra iji gboo mkpa ya dị iche iche site n'inweta ire na ịrụ ọrụ ụfọdụ na-adịghị mma. Dị ka ya si kwuo;
“Anyị enweghị ihe ọ bụla. Anọ m na-ere ite ọla kọpa na mkpụrụ osisi mgbe ụfọdụ ka m nwee ike ịzụta sanwichi. Abụkwa m onye na-elekọta ubi, na-egbutu ahịhịa. Anyị enweghị agụụ ịnwụ ma papa nwere ike ịkwụ ụgwọ pere mpe, n'ihi ya, m ga-ererịrị ihe m ga-enwetakwu. ”
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
Okposụkedi emi enye ọkọtọn̄ọde, emi ikanamke enye ọtọn̄ọ nditịn̄ se enye esịnede ke esịt esie, emi edi football. Mgbe Pereyra malitere ịgba bọl, ọ dịghị mgbe o nwere ụlọ ntu. Ọbụna mgbe o mesịrị buo, ọ ka na-eji ụkwụ ụkwụ ya egwu egwu, na-edebe akpụkpọ ụkwụ maka oge ịgba chaa chaa pụrụ iche.
Na mgba nile, Pereyra malitere ịkụ egwu maka onye ntorobịa n'akụkụ UTA Okporo Ụzọ njem Ụgbọ njem Argentina. Na 15, ọ na-egwuri egwu na Necochea, nke dị na ndịda Buenos Aires. N'ihi ịnụ ọkụ n'obi e mere ka ọ dị elu, ndị na-egwu mmiri na-adọrọ mmasị na ya. Ọ bụ na klọb Pereyra chọpụtara ezigbo ọrụ ya dị ka onye na-egwu egwu na onye ọkpụkpọ.
N'ịmara na ọ bịara site na mmalite dị umeala n'obi, Pereyra gbalịsiri ike imeziwanye onwe ya ka ọ bụrụ ahịa ụwa niile. Ọ bụ na Riverplate ka ọrụ ntorobịa ya kwụsịrị na ọ malitere inwe nnukwu echiche na klọb klọb nke nyere ya tiketi ya na Europe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ndụ mmekọrịta
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nwanyị. Oge a, na onye ọ bụla na-agba bọọlụ na-aga nke ọma, enwere ọmarịcha egwu dị ka a hụrụ na onye mara mma nke Maria Carolina, nke gosipụtara ịhụnanya maka ndụ ya.
Ugbu a, Pereya lụrụ Maria na ha abụọ nwere nwa nwoke aha ya bụ Maxi Jr Pereyra nke a mụrụ na October 2015.
Na-ekpe ikpe site na mgbe a mụrụ nwa nwoke Roberto Pereyra, ma ndị hụrụ ya n'anya ga-ezute n'oge ọ nọ na Osimiri Plate, oge ọ na-emebeghị ka ọ buru ibu.
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na -Nna na-arụkọ ọrụ
Onye ọ bụla nwere ike ịbụ nna, mana ọ na - achọ ezigbo nwoke dịka Roberto ka ọ bụrụ nne nwa ya nwoke.
Nye Roberto, ọ bụghị nanị ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọbụbụenyi na nwa ya nwee mmekọrịta. A na-ahụ ụdị àgwà a nke nna ukwu.
Dị ka n'oge ederede, Maxi Jr Pereyra na-agbaso nzọụkwụ nke papa. Ha abụọ nwere ike iwepụta oge (n'ime na n'èzí) na-egwu bọl.
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ndụ Ezinụlọ
Ndị mụrụ ya bụ mmụọ nsọ n'azụ ya inwe ịhụnanya na-enweghị atụ maka ezinụlọ ya. Na ikpe site na foto dị n'okpuru ebe a, Roberto Pereyra ghọtara n’ezie echiche nke ịnabata “Paykwụ rentgwọ Nne na NnaNkà ihe ọmụma.
Roberto Pereyra akwụghachila ndị mụrụ ya ụgwọ maka ịhụnanya nile, nlekọta, nlebara anya site na ịmụ nwa, karịsịa nkwado ha n'oge ọrụ ya.
Ihe kachasị mma n'ụwa a bụ ịhụ nna ya, mama, ụmụnne ya, na nwanne nwanyị niile obi ụtọ ma mara na ọ bụ ya kpatara obi ụtọ ahụ. Nnukwu ego ọ na-akwụ na ezinụlọ ya.
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na - Eziokwu nke Onye
Na ederede onwe gị, Pereyra nwere ọrụ, ịdọ aka ná ntị ma nwee njide onwe onye. Ọ hụrụ ezinụlọ ya na omenala Argentine ya n'anya.
Pereyra nwere nnwere onwe dị n'ime nke na-enyere ya aka inwe ọganihu dị ukwuu ma na ndụ ya na nke ndụ ya.
Enyi na enyi niile: A maara Pereyra ka ọ bụrụ ezigbo ndị enyi ya, ọbụna ndị nwere nkwarụ. E gosiri otu ihe atụ n'okpuru.
Banyere aha ya: Roberto Pereyra nwetara aha ya "El Tucumano"N'oge ya na Osimiri Plate. Ọ na-akọwa aha onye si mpaghara mpaghara Tucumano. Tucumán bụ obere ógbè dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Argentina. N'ihi ịhụnanya Roberto nwere maka ịzụlite na ndị ya na Tucuman, o kpebiri ịnọgide na-ebu aha ahụ. Nke a mere ya ka ọ na-eme ihe ọ na-eyi karịsịa akpụkpọ ụkwụ ya iji tinye okwu TUCU.
Banyere Okwukwe Ya: Dị ka e kwuru na mbu n'oge ndụ ya, ezinụlọ Roberto Pereyra bụ okpukpe Katọlik nke Iso Ụzọ Kraịst. Ọ na-agbasochi àgwà Katọlik.
Banyere Ememe Mgbaru Ọsọ ya: Mmalite nke 2018/2019 English Premier hụrụ ọhụụ ememme mgbaru ọsọ a site na Roberto nke ọ kpọrọ “Oro para ememe" nke pụtara my ihe mgbaru ọsọ dị ka Gold ka ememe.
Ị maara??... Ndị nwe Watford, ndị ezinụlọ Pozzo maara Roberto Pereyra nke ọma ma nwee mmekọrịta onwe ya.
Roberto Pereyra Ụmụaka Akụkọ nke Na -Ọrụ na-atụ egwu
Na 16 Disemba 2016, Pereyra nwere mmerụ siri ike ikpere n'akụkụ ụkwụ aka ekpe ya, bụ nke metụrụ ya aka-cartilage (ọkpụkpụ na-ama jijiji).
Ihe ọjọọ a mere ka ọ pụọ na football maka ọnwa 8 mgbe ọ tụrụ egwu na ọrụ ya agwụla. O kwuru nke a mgbe ọ gbakere;
"Ọ bụ oge siri ike n'uche,"
“Ọ na-ewute gị dịka ịchọrọ ịlaghachi. Ha na-agwa gị ọnwa isii na ị ga-enwe mmetụta kwa ụbọchị nke ọnwa isii ahụ. Ọ na-ewetu gị mmụọ, mana site na nraranye, ike, ike, na nkwado sitere na ndị ezinụlọ na ezi ndị enyi, ị ga-eru na njedebe nke ọwara ahụ. Manage jisiri ike gafere ya. Enwere m ekele maka onye ọ bụla kwadoro m n'oge nsogbu ahụ. "
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Roberto Pereya nke Ụmụaka na akụkọ banyere eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!